Maria’s Paradise (2019) | MM Movie Store
Drama Thriller Uncategorized
Maria’s Paradise ဆိုတဲ့ ဇာတျကားလေးကတော့ တကယျဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဖွဈရပျကို အခွခေံထားတဲ့ စိတျကူးယဉျဇာတျကားလေးဖွဈပါတယျ။ ၁၉၂၀ခုနှဈနောကျပိုငျး ဖငျလနျနိုငျငံမှာ ခရဈယာနျဘာသာတှငျး အသငျးအဖှဲ့တဈခု ခတျေစားခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီ့အဖှဲ့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျကတော့ ကောငျးကငျဘုံရဲ့ စတေမနျနဲ့ ဆကျသှယျနိုငျတယျလို့ ဆိုသူ Mariaလို့ချေါတဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးပါ။ Mariaကို ယုံကွညျသူတှဟော သူတို့ရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို Mariaကိုလှူဒါနျးကွတယျ။ Mariaဟာ ဒီငှတှေနေဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတှကေို မှေးစားထားခဲ့တယျ။
Salome ဆိုတဲ့ မိနျးကလေးကတော့ Mariaရဲ့အခဈြဆုံးမိဘမဲ့တဈဦးဖွဈပွီး Maria ဟာသူတို့ကို ကောငျးကငျဘုံဆီ လမျးညှနျပေးမယျလို့ ယုံကွညျထားသူပါ။ Marlin ကတော့ နတျဘုရားတှကေို မယုံကွညျသူ လမျးဘေးက ကောငျမလေးတဈယောကျပါ။
Maria လုပျသမြှ အကုနျယုံကွညျပေးသူ Salome တဈယောကျ Marlinနဲ့ခငျသှားပွီး ကောငျးကငျဘုံအစား ကမ်ဘာတဈဝှမျးကို သူငယျခငျြးနဲ့အတူ ခွဆေနျ့ခငျြလာတဲ့အခါမှာတော့……. ???
ဘာသာတရားကို သကျဝငျယုံကွညျသူနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ လူတှရေဲ့စိတျကို ခွယျလှယျနသေူတို့ကွားကို အတှေးအချေါမတူတဲ့ လူတဈယောကျဝငျလာတဲ့အခါ ဘယျလိုတှဖွေဈပကျြသှားမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတျကားလေးထဲမှာ စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ။
Maria’s Paradise ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင်း အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကတော့ ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ စေတမန်နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုသူ Mariaလို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။ Mariaကို ယုံကြည်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို Mariaကိုလှူဒါန်းကြတယ်။ Mariaဟာ ဒီငွေတွေနဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို မွေးစားထားခဲ့တယ်။
Salome ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကတော့ Mariaရဲ့အချစ်ဆုံးမိဘမဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Maria ဟာသူတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံဆီ လမ်းညွှန်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ထားသူပါ။ Marlin ကတော့ နတ်ဘုရားတွေကို မယုံကြည်သူ လမ်းဘေးက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။
Maria လုပ်သမျှ အကုန်ယုံကြည်ပေးသူ Salome တစ်ယောက် Marlinနဲ့ခင်သွားပြီး ကောင်းကင်ဘုံအစား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ခြေဆန့်ချင်လာတဲ့အခါမှာတော့……. ???
ဘာသာတရားကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ကို ခြယ်လှယ်နေသူတို့ကြားကို အတွေးအခေါ်မတူတဲ့ လူတစ်ယောက်ဝင်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်သွားမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။